Fahasamihafana eo amin'ny Sprinter sy ny Marathon Runner | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Sprinter sy ny Marathon Runner | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Fiainana / Fialam-boly / Fanatanjahantena / Fahasamihafana eo amin'ny Sprinter sy ny Marathon Runner
Fahasamihafana eo amin'ny Sprinter sy ny Marathon Runner
8 Aogositra 2021 Narotsak'i Sethmini
Ny mahasamihafa azy eo amin'ny mpihazakazaka sy ny hazakazaka marathon dia ny vatan'ny sprinter ho an'ny hafainganana sy ny hery, fa ny vatan'ny mpihazakazaka marathon kosa dia natao hiaretana lava sy miadana.
Ny Sprinters dia mifantoka amin'ny hery sy ny hafainganana ary mampiasa hozatra haingana . Ireo mpihazakazaka marathon dia mifantoka amin'ny tanjaka sy fiaretana ary mampiasa hozatra miadana miadana . Miankina amin'ireo fepetra takiana ireo dia tsy mitovy koa ny fampiofanana ataon'izy ireo.
2. Iza no Sprinter
3. Iza no Marathon Runner
4. Sprinter vs Marathon Runner amin'ny endrika Tabular
6. Famintinana - Sprinter vs Marathon Runner
Iza no Sprinter?
Sprinter dia mpihazakazaka lavitra. Ny sprinter dia voaofana ho an'ny tanjaka, hery mahery vaika ary hakingana. Ny sprinter dia hozatra ary tsy manana fepetra firy amin'ny fanjifana oksizenina faran'izay betsaka satria vita haingana ny fihazakazak'izy ireo. Manana kofehy hozatra haingana izy ireo. Ireo hozatra ireo dia mamorona fifandonana haingana izay reraka haingana.
Ny Sprinters dia matetika ampiofanina amin'ny lanjany maimaim-poana sy ny fampihetseham-batana plyometric amin'ny vatana, izay fihetsika mitambatra izay mamorona hafainganam-pandeha sy hery. Noho izany, ny fiofanan'izy ireo dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny kofehin'ny hozatra haingana sy ny rafi-pôpôgyôgy amin'ny alàlan'ny fampivelarana hery, hafainganana ary tanjaka. Matetika izy ireo dia mampiasa ny rafitra phosphagen, izay matetika ampiasaina amin'ny hetsika mahery vaika izay maharitra 10 segondra. Ankoatr'izay, mampiasa rafitra glycolytic izy ireo amin'ny sprint afovoany toa ny 400 metatra. Ity rafitra glycolytic ity dia ampiasaina amin'ny hatraiza hatraiza izay matetika maharitra minitra maromaro.
Ny tahan'ny tahan'ny sprinter mandritra ny hamafiny dia mety ho 80% -90% farafaharatsiny. Izany dia azo tazomina mandritra ny fotoana fohy. Ireo Sprinter dia tokony hampihatra ny hafainganan'izy ireo amin'ny fihetsiky ny basy fanombohana satria tokony hanana fiandohana tsara kokoa izy ireo hijanona amin'ny fifaninanana amin'ny hazakazaka; na ny sombintsombin'ny segondra aza dia tena zava-dehibe amin'ireo hazakazaka ireo. Misy fanazaran-tena isan-karazany amin'izany, toy ny mitsambikina sy miakatra amin'ny tohatra tady amin'ny fihainoana ny famantarana nataon'ny mpanazatra. Misy ihany koa ny fomba fanao hanatsarana ny halavan'ny diany, ny fihetsika amin'ny vatana ary ny fihetsiky ny sandry.
Mandritra ny hazakazaka, ny sprinter dia mila lava faran'izay betsaka araka izay tratrany manimba ny fifandanjan'izy ireo. Amin'ny ankapobeny, ny sprinter dia mampiofana ny vatany ambony handanjalanja amin'ny vatana ambany. Ny fihinanan-tsakafo Sprinters dia matetika miankina amin'ny vatany, ny karazan-tsakafo ary ny lamina fanazaran-tena izay mamaly ny vatany. Amin'ny andron'ny hazakazaka, ny sakafo mahavelona nalaina dia tokony ho afaka hampihena ny alahelo sy ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny gastrointestinal, ary hampitombo ny fiasan'ny hozatra. Amin'ny ankapobeny ny sprinter dia mila maka proteinina bebe kokoa; noho izany, ny sakafo toy ny atody, hena, trondro, tsaramaso, voanjo ary vokatra vita amin'ny ronono no tsara indrindra ho azy ireo.
Iza no Marathon Runner?
Ny mpihazakazaka marathon dia mpihazakazaka lavitra. Ny mpihazakazaka marathon dia zarina amin'ny fiaretana, toy ny fotoana ahafahan'ny hozakan'izy ireo mandefitra ny famokarana angovo aerôbika (izay antsoina koa hoe tokonam-bavak'izy ireo). Ny fomba tsara indrindra hampivelarana izany dia ny mihazakazaka eo amin'ny tokonam-baravarana misy azy ireo mandritra ny adiny iray eo ho eo. Manampy ny vatana hizatra amin'ny fananana haavon'ny lactate ambony ao amin'ny ra sy ny hozatra. Mihamitombo ny tokonan'ny laktate rehefa zatra ny vatana ny fitomboan'ny asidra lakaktika. Ampiofanin'izy ireo ny kofehin'izy ireo miadana-twitch hanomezana azy ireo angovo bebe kokoa, izay haharitra mandritra ny 42km eo ho eo. Ny hozatra mihetsiketsika miadana dia kofehy miadana oksidatif izay miteraka fihenan'ny hozatra miadana, ary tena mahatohitra ny harerahana.
Ireo mpihazakazaka marathon dia matetika mampiasa ny rafitra oksidatif, izay matetika ampiasaina amin'ny fanazaran-tena ambany izay maharitra mandritra ny minitra maromaro, ary ny rafitra glycolytic, izay ampiasaina amin'ny hetsika miaraka amin'ny tanjaka antonony izay maharitra minitra maromaro mandritra ny ambiny. Ny salanisa dia 95% -5%. Ny tanjon'izy ireo dia ny hampivelatra ny tanjaka, ny fiaretana hozatra ary ny fahasalaman'ny kardiorespiratory. Ny tahan'ny fony dia eo anelanelan'ny 60-70% farafaharatsiny. Na izany aza, miaraka amin'ireo mpihazakazaka marathon efa za-draharaha, dia mety ho eo anelanelan'ny 70-80% farafaharatsiny.
Ireo mpihazakazaka marathon dia mila mamonjy angovo mandra-pahavitany ny hazakazaka. Ho an'izany, misy fiofanana isan-karazany toy ny elanelam-potoana lava, mampiditra havoana, ary halavirana lava. Ny fanarahana ireo fomba ireo dia manampy ny vatany hianatra ny fomba hitehirizana angovo amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fibra hozatra tena mahomby indrindra amin'ny hazakazaka iray. Ireo mpihazakazaka koa dia miofana manao fanitsiana raha lany hery. Ireo mpihazakazaka marathon dia mila gliosida sy menaka betsaka amin'ny sakafony, indrindra ny 36-48 ora alohan'ny hazakazaka. Manampy azy ireo hanana angovo bebe kokoa izany. Ho fanampin'izany, ny fihinanana sakafo voalanjalanja tsara dia zava-dehibe ho azy ireo, izay ahitana voamaina, legioma, voankazo ary proteinina mahia.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Sprinter sy ny Marathon Runner?
Ny sprinter dia mpihazakazaka lavitra, raha ny mpihazakazaka marathon dia mpihazakazaka lavitra. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny mpihazakazaka sy ny hazakazaka marathon dia ny vatan'ny sprinter ho an'ny hafainganam-pandeha sy ny hery raha ny vatan'ny mpihazakazaka marathon dia zatra fiaretana maharitra sy miadana.
Ity infographic manaraka ity dia mitanisa ireo fahasamihafana misy eo amin'ny mpihazakazaka sprinter sy marathon amin'ny endrika tabilaoro raha ampitahaina.
Famintinana - Sprinter vs Marathon Runner
Ny sprinter dia mamita ny hazakazaka haingana satria fifaninanana elanelana fohy, 400 metatra na latsaka. Tokony hifantoka amin'ny teknika izy ireo. Tena ilaina ny haingam-pandeha amin'ny hazakazaka toy izany. Ny mpihazakazaka marathon dia mifantoka amin'ny fiaretana satria tokony hihazona ny heriny mandritra ny fotoana lava kokoa izy ireo. Tokony hampihatra fihenan-tena ihany koa izy ireo ary hatanjaka kardiorespiratory satria manodidina ny 42 kilometatra ny halavany. Noho izany, ity no fahasamihafana lehibe eo amin'ny sprinters sy ny hazakazaka hazakazaha.
1. “ Sprint (Mihazakazaka) .” Wikipedia , Foundation Foundation, 4 Aog 2021.
2. “ Marathon .” Wikipedia , Foundation Foundation, 5 Aog 2021.
1. " Mihazakazaka, fanampiny, kilometatra, olona, ​​mavo, tanky, ambony, mainty " (CC0) via Piqsels
2. " Race Marathon Runner Grey Run Running Gray Running " (CC0) via Max Pixel
Fahasamihafana eo amin'ny lalao sy ny fanatanjahan-tena Fahasamihafana eo amin'ny Kitesurfing sy Windsurfing
Filed Under: Fanatanjahantena
Momba ny mpanoratra: Sethmini
Sethmini dia nahazo diplaoma amin'ny teny anglisy miaraka amin'ny BA (Voninahitra) amin'ny fampianarana anglisy sy anglisy. Liana amin'ny fiteny izy ary mpampianatra anglisy efa za-draharaha. Tiany ny manoratra amin'ny lohahevitra toy ny zavakanto, mozika, dihy, fitsangatsanganana, natiora ary sakafo.
Fahasamihafana eo amin'ny Ureter sy Urethra
Fahasamihafana eo amin'ny rahona tsy miankina sy rahona ampahibemaso
Fahasamihafana eo amin'ny mialoha sy ny ho avy
Fahasamihafana eo amin'ny fanjakana sy ny fahalalam-pomba
Fahasamihafana eo amin'ny oven sy ny oven micro oven
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny hemothorax sy ny pnemothorax
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fitambaran'ireo metatra sy ny vahaolana miharo vahaolana
Inona ny fahasamihafana eo amin'ny gadona Junctional sy Idioventricular
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny hena mena sy fotsy